AdventureQuest 3D MMO RPG 1.28.1 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 1.28.1 လြန္ခဲ့ေသာ6ရက္က
ဂိမ္းမ်ား တကိုယ္ေတာ္ AdventureQuest 3D MMO RPG
AdventureQuest 3D MMO RPG ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
Korn is playing the grand opening of the Battle Concert Arena in AdventureQuest 3D! Grab your friends and join fellow players in an unforgettably brutal, monster filled virtual-rock-concert.
Become part of AdventureQuest 3D's growing online world! We're building new areas under your feet as you play it.
Korn AdventureQuest 3D အတွက်တိုက်ပွဲဖျော်ဖြေပွဲ Arena ရဲ့ခမ်းနားဖွင့်ပွဲကစားနေပါသည်! သင့်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုဖမ်းပြီးတစ်ခုမမေ့နိုင်သောရက်စက်ကြမ်းကြုတ်စွာ, နဂါးဖြည့်က virtual-ရော့ခ်-ဖျော်ဖြေပွဲအတွက်သူချင်းကစားသမား join ။
ဤသည်မှာ MMORPG သင်သည်သတိပေးခံခဲ့ရ ... နည်းနည်းကွဲပြားပါတယ်။
AdventureQuest 3D ရဲ့ကြီးထွားလာအွန်လိုင်းကမ္ဘာ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာ! သင်က play အဖြစ်ငါတို့သည်သင်တို့၏ခြေအောက်၌အသစ်သောဒေသများတည်ဆောက်ခြင်းပါတယ်။
မျှောဆရာအထွေထွေ'S သတိပေးချက်ဒီဂိမ်းတစ်ခုတည်းသောစိတ်ကူးယဉ် MMORPGs, ဓား & တတ်, Open-ကမ္ဘာကြီးဂိမ်း, စိတ်အားထက်သန်ပါဝင်ပတ်သက်ဂိမ်း developer များနှင့်အမှားအားဖြင့်လုံးဝဒီနေရာမှာလည်ပေမယ့်ဒေါင်းလုပ်လုပ်များနှင့်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သူကချစ်တဲ့လူတွေ၏ပရိသတ်များအဘို့ဖြစ်၏။ AE ရဲ့ခန့်မှန်းရခက်သောလျှာ-In-ပါးဟာသ, ပျက်လုံးများ, puns, ဒါပမေဲ့အံ့သွ-fused မိကျောင်း (Werepyres?) ဆံ့နှင့်ဂိမ်းကစားပွဲပင်စတင်သည်မီသေဆုံးပါလိမ့်မယ်တစ်ဦး 99% အခွင့်အလမ်းလည်းမရှိနိုင်အောင်နှင့်အနောက်တိုင်းအမာခံဖြစ်ပါတယ်နိုင်ပါစေ။ ဒါပေမဲ့ဟေး, ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးသင်ငြင်းဆန်လို့မရပါဘူးတဲ့သဘောတူညီချက်စေမည် (The ဖှယျ Reaper ခေါ်) ကံကောင်းနှင့်သေခြင်းရပါလိမ့်မယ်။ ထွက်ရှာတွေ့မှသာလျှင်တလမ်းတည်း။
Pay-to-WIN မဟုတ်ပါ XD
LIVE & အထူးအဖွစျအပကျြ
မိကျောင်း spawn မှပါဝါနှင့်အတူ•အသေးစားအဖွဲ့သည် = အရူး devs
အခမဲ့ Near-WEEKLY DLC! NEW Adventures
•ကြာသပတေး-ish တွင်အပတ်စဉ်-ish ထုတ်ပြန်ပြောကြားချက်များကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ
AQ3D TRUE cross-platform IS
•ဟုတ်ကဲ့, ရှိသမျှပစ္စည်းတွေတူညီဤလောကသို့ log
•ဟုတ်ကဲ့, သင်သည်သင်၏ဖုန်းသို့အကူးအပြောင်းနှင့် potty ကယူ, ပြီးတော့သင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာပေါ်မှာကစားပြန်သွားနိုင်ပါတယ်
အကောင်းဆုံး MMORPG villain & Monster
• Vampire ရှင်များ ဟူ.
• Werewolf gladiator
• Pirates, Ninja "ဟု Braken"
•သခွေငျး - Underworld ရဲ့ Celebrity
• Drickens - တစ်ဝက်နဂါးတဝက်ကြက်သား
တစ်မူထူးခြားသော HERO စေ
•ကျွန်ုပ်တို့၏ barbershop ကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါသည်
• (သင်သည်အဘယ်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုဒီ !? ပြုပါစေခဲ့ဘူး), ဓား Equipment scytheblades (Scythe + ဓားကို = ကြောက်မက်ဘွယ်), တိုးတက်မှုနှုန်းမငြိမ်မသက်လှုပ်ရှားခြင်း Wand, Pew Pew thingies, သံချပ်ကာ, ရှည်လျားသောအင်္ကျီ, လက်အိတ်, ဖိနပ်, Cape, ပဲ့, ခါးပတ်, ဆံပင်ရှာဖွေနေ matrixy & ဆက်စပ်ပစ္စည်း (ဦးခေါင်းခွံဆံပင်ကလစ်ပ်အခုအချိန်မှာဒါပူ) သင်ချင်တယ်သို့သော်။
Multi-CLASS: သင်လုပ်ချင်တဲ့နည်းလမ်း PLAY
• Necromancer, Paladin, DragonSlayer, Ninja, Rogue, Warrior, တူသောမာဂုပညာရှိအတန်းစုဆောင်း
ကြည့် & ခုန်
• AQ3D သင်ကောင်းကင်ပြာမှာတက်ကြည့်ရှုပေးနိုင်ပါတယ်သောရှားပါးမိုဘိုင်း MMO ပါ!
•အမှုအရာအပေါ်ဤနေရာသို့သွားရန်။ ဘယ်ကိုဆိုလို ...
parkour အခက်အခဲ Maps
သငျသညျအကြှနျုပျတို့သညျကြှနျတျောတို့ parkour မြေပုံအချို့သည် 100% မကောင်းသောအများမှာဒီဂိမ်း XD အတွက်ခုန်စေနောင်တပါလိမ့်မယ်။ LAZORS!
•ခြုံအသွင်ပြောင်း ... အဆင်မပြေလှဲ။
ထောင်ထဲက, RAID, & Boss တိုက်ပွဲများစိန်ခေါ်မှုများ
(ထိုနဂါးရဲ့ Lair တူသော) • 20 ကစားသမားစီးနင်းမှု
5 player ကိုထောင်ထဲ•
•2Player ကို Adventures ... နေ့စွဲညဥ့်?
•တစ်ကိုယ်တော် - ငါကျောင်းကခုန်ဖို့သွားသောအခါရုံကြိုက်တယ်
•တိုက်ပွဲ Monsters ရီးရဲလ်အချိန်တိုက်ခိုက်ရေးအတွက်
•သုို့ခေါ် & တယ်လီပို့သည်သင်၏သူငယ်ချင်းများမှ
• Cutscenes သငျသညျကိုကျော်သွားချင်မည်မဟုတ်! (သေချာသလောက်)
•ကြှနျုပျတို့လာမယ့်ဖွံ့ဖြိုးဆဲဖြစ်ကြောင်းအဘယ်အရာကိုမြင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ website ကို Check
အညှာ ... erm လုံးကို AQ3D ရူး FOR Us Follow!
တရားဝင် SITE ကို
Twitter: @ArtixKrieger သို့မဟုတ် https://twitter.com/artixkrieger/
ကျနော်တို့ဂိမ်းကစားတစ်ဦးတက်ကြွအသိုင်းအဝိုင်းဖြစ်ကြသည်။ Artix နှင့်အဖွဲ့သည် www.AQ3D.com မှာဂိမ်းနောက်တစ်နေ့တွင်လုပ်ကိုင်နေကြတယ်ဆိုတာကိုအပေါ်သူလျှို
AdventureQuest 3D MMO RPG အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
AdventureQuest 3D MMO RPG အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
AdventureQuest 3D MMO RPG အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
AdventureQuest 3D MMO RPG အား အခ်က္ျပပါ
premiumapp စတိုး 2.26k 3.17M
AdventureQuest 3D MMO RPG ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
ေနာက္ထပ္ တကိုယ္ေတာ္ အက္ပ္မ်ားကို ၾကည့္မည္
APK အေၾကာင္း AdventureQuest 3D MMO RPG အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 1.28.1
ထုတ်လုပ်သူ Artix Entertainment LLC
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ http://www.aq3d.com/policy-privacy
App Name: AdventureQuest 3D MMO RPG
File Size: 45.08MB
Release date: 2019-09-14 18:37:04
လက်မှတ် SHA1: EE:84:38:84:F7:3E:BE:47:E9:89:EA:0C:C3:4E:D9:53:C5:A7:22:5C
ထုတ်လုပ်သူ (CN): JD Adams
အဖွဲ့အစည်း (O): Artix Entertainment LLC
နယ်မြေ (L): Tampa
AdventureQuest 3D MMO RPG APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ